ရန်းနစ် နဲ့ ဖာဒီနန် စောဒက တက်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့တတိယဂိုးဟာ ဘာကြောင့် လူကျွံဘော မဖြစ်တာလဲ ? - xyznews.co
ရန်းနစ် နဲ့ ဖာဒီနန် စောဒက တက်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့တတိယဂိုးဟာ ဘာကြောင့် လူကျွံဘော မဖြစ်တာလဲ ?
April 23, 2022 - by Editor
ယူနိုက်တက် နည်းပြ ရန်းနစ် နဲ့ နောက်ခံလူဟောင်း ​ရီယို ဖာဒီနန် တို့ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းကို ရှုံးနိမ့် ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ရှာကာ ရဲ့ သွင်းဂိုးကို လူကျွံဘော အဖြစ် မသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အပေါ် စောဒကတက်ခဲ့ကြပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းကို ၃-၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ ပွဲတွင် ရှာကာ ရဲ့ သွင်းဂိုးမှာ အန်ကီးတီးယား လူကျွံ အနေအထားမှာ ရှိနေပြီး ဂိုးသမား ဒဟဲယား ရဲ့မြင်ကွင်းကို ကွယ်နေခဲ့ကြောင်း ရန်းနစ် နဲ့ ဖာဒီနန် တို့က ထောက်ပြ ခဲ့ကြတာပါ ။
ရန်းနစ် က ” ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ဒုတိယဂိုးက လူကျွံဘော မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ၊ သူတို့(အာဆင်နယ်)ရဲ့ တတိယသွင်းဂိုး က လူကျွံနေခဲ့ပါတယ် ၊ သူတို့(VAR) စစ်ဆေး ခဲ့ကြပေမယ့် သွင်းဂိုး အဖြစ်ပဲ သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ဖာဒီနန် ကလည်း ” သူ(အန်ကီးတီးယား) လူကျွံနေပါတယ် ၊ရှာကာ ရဲ့ ကန်ချက် က တကယ်ကောင်းပါတယ် ၊ သူ ကန်လိုက်တာက မြှားပစ်လိုက်သလိုပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ကန်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒဟဲယားရဲ့ အနေအထားကို ကြည့်ကြည့်ပါ ၊ သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းကို အန်ကီးတီးယား က နှောင့်ယှက် သလို ဖြစ်နေပါတယ် ၊ သူက လူကျွံအနေအထားမှာ ရပ်နေခဲ့ပါတယ် ။ ”
” သူ့ကြောင့် ဒဟဲယား က ကိုယ်ကို ယိုင်ပြီး ကြည့်ခဲ့ရပါတယ် ၊ သူက ဒဟဲယား နဲ့ တစ်တန်းတည်း ရှိနေခဲ့တာပါ ၊ ဒဟဲယား ရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားက အန်ကီးတီးယား ဆိုတာ တွေ့ကြမှာပါ ၊ အန်ကီးတီးယား က ဒဟဲယား နဲ့ နီးတယ် မနီးဘူး က အဓိက မဟုတ်ပါဘူး ၊ လူကျွံအနေအထားမှာ ရှိနေတဲ့ ကစားသမားကြောင့် ဒဟဲယား က စောင်းပြီး ကြည့်လိုက်ရတာက အဓိကပါ ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ဒိုင်လူကြီး​ဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ပီတာ ဝေါလ်တန် ကတော့ ရှာကာ ရဲ့ သွင်းဂိုးဟာ ဘာကြောင့် လူကျွံဘော မဖြစ်တာလဲဆိုတာ ခုလို ရှင်းပြ သွားခဲ့ပါတယ် ။ ” ပြိုင်ဘက် ကစားသမား က အမြင်လမ်းကြောင်း နဲ့ ဂိုးသမား ရဲ့ အမြင်အာရုံကို အနှောင့်အယှက်ပြုရင် ပြစ်ဒဏ်ဘော အဖြစ် သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ် ။ ”
” ဒဟဲယား က အန်ကီးတီးယား ကို ဝေ့ဝိုက်ပြီး ကြည့်နေရတယ်လို့ စောဒက တက်နိုင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် လင်ဒီလောဖ့် လည်း ရှိနေတာပဲလို့ ပြန်ပြောလို့လည်း ရပါတယ် ၊ ဘောလုံး ကန်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒဟဲယား ရဲ့မြင်ကွင်းကို အမှန်တကယ် ပိတ်နေခဲ့တာက လင်ဒီလောဖ့်ပါ ။ ”
” VAR က ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ကြည့်ပီး ဂိုးရှေ့မှာ ပိတ်နေခဲ့တာ က အန်ကီးတီးယား ထက်စာရင် လင်ဒီလောဖ့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချ​က် ချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သွင်းဂိုး ကို ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ ၊ VAR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် က ဒီတစ်ခုမှာ မှန်ကန်ပါတယ် ။ ” လို့ ရှင်းပြ သွားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article ရန်းနစ် နဲ့ ဖာဒီနန် စောဒက တက်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့တတိယဂိုးဟာ ဘာကြောင့် လူကျွံဘော မဖြစ်တာလဲ ?
Next Article ရော်နယ်ဒို ပင်နယ်တီ မကန်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၊ စိတ်ပျက််မိတဲ့ အချက်တစ်ခု ၊ VAR ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ရန်းဂနစ်